Sweetspot: A Mobile First, Arụ Ọrụ-Kwadoro Digital Dashboard | Martech Zone
Sweetspot: A Mobile Mbụ, Workflow-Powered Digital Dashboard
Ohere ị bụ na ị hụla otu ma ọ bụ usoro ntanetị ọhụụ dijitalụ na ọnwa ole na ole gara aga. Ihe ndị a dịgasị iche site na ngwungwu nkwụnye na-egwu jikọtara ọnụ ọgụgụ dị nta nke mgbasa ozi na ntanetị nchịkọta usoro, iji nweta ụlọ ọrụ zuru ezu nke e kere eke gụnyere ọtụtụ usoro data na njirimara gọọmentị.
Sweetspot na-ekwu na ị ga-ewere nke ikpeazụ na ọkwa ọhụrụ, na-achọ ime ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla maka "ụlọ ọrụ data" ụlọ ọrụ na-eme ihe ha. Ogo nke ụfọdụ ndị ahịa ya (P&G, Shell, Santander, Red Bull) yana uto uto ya na-egosi ihe ịga nke ọma na ebumnuche ya.
Nke a bụ nnyocha nke Sweetspot ọgụgụ isi'S isi atụmatụ:
Mobile mbụ Executive dashboards, gụnyere Smartwatch ngwa - Sweetspot anaghị atụ anya ka ndị ahịa data na ọkwa ndị isi banye usoro ọzọ na ihe nchọgharị ha. Kama nke ahụ, ha na-enweta mmelite ọkwa (yana mmekọrịta ndị otu) na gburugburu ebe obibi. N’ụzọ dị oke mkpa, data dịkwa na ọnọdụ offline. Na mgbakwunye na iPad (n'okpuru), iPhone na gam akporo ngwa, Sweetspot na-enye a smartwatch zuo ezu (Weebụ Sweetspot) na-enye ohere maka olu na-arụ ọrụ KPI na-achọpụta ihe n'ụzọ dị omimi.
Unlimited data isi mmalite - Kama inye oke oke API ma ọ bụ njikọ CSV, Sweetspot na-anọgide na-emeghe ikpo okwu ebe ndị ahịa na-enwe ike ịrịọ njikọta ọhụụ na-achọ. A na-agbakwunye ndị a na ndepụta nke njikọ data dị ezigbo oke.
Wuru na-ochichi data - Nnweta KPI dabere na ikike onye ọrụ (na ọkwa mmadụ na otu) n'ime Sweetspot. Ejikọtakwara ha na ike 'otu nbanye' na ọkwa dịgasị iche iche nke ndị isi iji kwado usoro ụlọ ọrụ jikọrọ ọnụ.
Nlekọta Anya - Sweetspot abụrụla ọsụ ụzọ na oghere Digital Insight Management. N'ịbụ ndị nyere ndị ahịa ihe ngosi ọrụ na afọ ole na ole, ha mezigharịrị n'oge na-adịbeghị anya, na -emepụta usoro nwere ike ịnweta ma na-emetụta ndị na-eme mkpebi na ndị nyocha. Ikike ịtọọ ihe nyocha dị mkpa ma jụọ ajụjụ, n'ụzọ dị irè na pịa bọtịnụ, site na ịpịpụta dashboard ihe na-enyere aka melite nkwukọrịta nzukọ na njikwa ahịa dijitalụ na nnukwu ụlọ ọrụ.
Oké mgbanwe na nkọwa nke multi-iyi dashboards - Onweghi ihe ngosi dijitalụ dijitalụ nwere ike ikwu na ọ dabara na onyinye ụlọ ọrụ na-enyeghi onye nwe dashboard ọ bụla ohere ịkọwa dashboard ha dị iche iche dịka mkpa nke ha si dị. N'ụzọ a, ndị mmadụ n'otu n'otu, ngalaba, ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ikpokọta data na-aga site na akụ ha niile na njikọta pụrụ iche iji hụ na ndị KPI ha na-ekwu maka ebumnuche ha, ibu ọrụ ha na ihe ha chọrọ.
Oke scalability - Iji rụọ ọrụ nke ọma ndị ahịa ha nke 100, Sweetspot ji oke scalability arụ ọrụ. Corporate Templates ™ na ikike idetuo gafee egosi n'ime akaụntụ bụ nanị ụzọ ọzọ na Sweetspot na-ewe ntuziaka mgbalị nke na-akọ na-azọpụta òtù oge.
Ugbu Sweetspot ndị ahịa gụnyere Royal Dutch Shell, Procter & Gamble, Santander, Red Bull, Mapfre, BBVA, Philips, The Boston Globe, FastCompany, Inc.com, Martha Stewart na The Green Bay Packers.
Tags: BBVAnnukwu datadashboard dijitalụngwa ngwaGreen Bay-akwanye ngwongwo n'ụgbọalaInc.comMapfreMartha Stewartmobile dashboardarụ ọrụ mkpanakaPhilipsProcter & GambleRed ehiRoyal Dutch ShellSantanderSọọtpotọgụgụ isi sweetspotThe Boston Globewearable techWearables
Ahụmịhe ndị ahịa dara ada na-ebibi ahịa gị